“क्लबहरू कर्पोरेट स्वरूपमा जान आवश्यक छ ” डा . पुन « KhelkudNews.com
Published On : 16 October, 2021 10:14 am
डा. लाल कुमार पुन । ब्रिगेड ब्वाइज क्लबका अध्यक्ष । रेडियोलोजीस्ट पुन एलाइट हेल्थ क्लिनिकका अध्यक्ष हुन् । प्रतिष्ठित पेसामा आबद्ध पुनको खेलकुद र सामाजिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सक्रियता छ । तीनै पुनसँग नेपाली परिवेशमा क्लब नेतृत्वका सामु रहेका चुनौतीको बारे गरिएको कुराकानीको सार संक्षेप
ब्रिगेड ब्वाइज क्लब (बिबिसी) लाई सम्पन्न व्यक्तिहरूको क्लब भए पनि सफलता पाउन नसकेको क्लब भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ नि । यसको कारण के होला ?
पहिला हामी आफ्नै उत्पादनमा केन्द्रित रहेर खेल्ने गरेका थियौँ । विदेशमा बसेर फर्केकाहरू तथा यहीँ रहेकाहरू सबै मिलेर यो क्लबलाई अगाडी बढाएका थियौ । यसैका आधारमा हामी बि डिभिजन च्याम्पियन हुँदै ए डिभिजनमा प्रवेश गरेका थियौ ।
अहिले समय फेरिएको छ । फुटबल महँगो खेल भएको छ । अन्य क्लबले जस्तो महँगो मूल्य तिरेर खेलाडी अनुबन्ध गर्ने हाम्रो अवस्था रहेन । बी डिभिजन खेलेका, ए डिभिजनमै रहेका प्रतिभाशाली केही खेलाडी, अवसर नपाएका मोफसलका खेलाडीलाई निखार्दै मैदानमा उतार्नु हाम्रो बाध्यता नै बन्यो । यसको एउटै कारण थियो, हाम्रो अन्य क्लबको जस्तो कुनै निश्चित आम्दानीको श्रोत थिएन ।
हाम्रो प्रशिक्षकको मेहनत, क्लब समर्थकको सहयोग र हामीले पहिचान गरेका खेलाडीको प्रतिभाकै कारण हामी टिकेका छौ । पछिल्लो समय भने अन्य क्लबले र हामीले पनि विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गरेका थियौ । संयोगवश हामीले अनुबन्ध गरेका विदेशी खेलाडीको प्रदर्शन त्यत्ति स्तरीय देखिएन, जत्ति अन्य क्लबको देखियो ।
मुलरुपमा हाम्रो समस्या भनेको हाम्रो आम्दानीको निश्चित श्रोत नहुनु नै हो । क्लब मैदान, सटर या भवन लगायत नियमित आम्दानीको श्रोत हामीसँग छैन ।
तपाईँहरूले यु–१८ फुटबलको उपाधि जित्नु भयो । यस पछि प्रायोजकहरूको चासो त बढी हुनु पर्ने नि ।
हामीले जिते पछि यस कुराको सम्भावना थियो । हामी यसमा लागि परेका पनि थियौ । संयोगवश त्यसै समय कोभिड महामारी देखियो । यस पछि समय धेरै फेरिएको छ । तर, पनि उमेर समूहको त्यो प्रदर्शन हाम्रा लागि किन महत्त्वपूर्ण रहेको छ भने सो समयका प्रतिभालाई हामीले राम्रोसँग चिनेका छौ ।
एकातीर हाम्रै आँखा अगाडी थुप्रै सामाजिक समस्या छन् । यस बिचमा नेपालमा फुटबल महँगो पनि भएको छ । यस कारण फुटबल छाडेर अन्यत्र कतै संलग्न हुँदा सही हुँदैन र ?
हामीलाई यसो लागेको पनि थियो । बिचमा केही समय फुटबलबाट टाढा हुने सोचाइ रहेको थियो । यस बिचमा ज्योति पाण्डे (एनआइबीएलका कार्यकारी अधिकृत) ले हाम्रो वडाको सानको रूपमा रहेको यो क्लब फुटबलबाट टाढा हुन नुहुने धारणा राख्नु भयो ।
उहाँको सहयोग पनि रह्यो । हामी फेरी फुटबलको दुनियाँमा फर्केका हौ । यसको अर्को वर्ष हामी फेरी ए डिभिजनमा उक्लियौ । यस क्रममा प्रशिक्षक सनोजको पनि राम्रो भूमिका रह्यो । हामीलाई एकदम अप्ठेरो परेको समयमा सनोज सँग सहकार्य गर्न पाउँदा मात्र पनि खुसी हुने खेलाडीको जमात पायौँ ।
यसो भए तपाइ सनोज श्रेष्ठ र ज्योति पाण्डे यस क्लबको मेजर “ कम्पोनेन्ट ” भन्न चाहनु हुन्छ ?
त्यसो होइन । क्लबका धेरै कम्पोनेन्ट मध्यको एउटा कम्पोनेन्ट उहाँहरू हो भन्न चाहन्छु । हामीहरू सँग दौडधुप गर्ने एउटा टोली छ । विदेशबाट सहयोग गर्ने एउटा ठुलो समूह छ । बिबिसी बेलायत र बिबिसी हङकङ पनि रहेको छ । यस कारण हामी एउटा ठुलो कम्पोनेन्ट सहित चलेका छौ । यी धेरै कम्पोनेन्टमा हामीले थप ज्योति प्रकाश जस्तो सहयोगी पाएका छौ र सनोज जस्तो राम्रो प्रशिक्षक पाएका छौ ।
यो समुदायमा क्लबका फुटबल बाहेकका अन्य जिम्मेवारी पनि हुन सक्छ नि ?
पहिला हामी विभिन्न कुरामा संलग्न भएका थियौ । बास्केटबल, ब्याडमिन्टन र टेबल टेनिसमा हामी आबद्ध थियौ । प्रतियोगिता आयोजना र प्रशिक्षण पनि भएका थिए ।
यसका साथै हामी भूकम्पको समयमा टहरा निर्माण लगायत काम गरेर धेरैको आवासमा सहयोग गरेका थियौ । अहिले फुटबलमा धेरै लगानी आवश्यक पर्ने र श्रोत जुटाउनु पर्ने भएका कारण यसमा बढी ध्यान दिइएको हो ।
तपाइहरूको टोली कार्यसमितिमा आए पछि नयाँ योजना चाहिँ के के छ ?
अहिलेसम्म हामी गैर नाफा मूलक अर्गजनाइजेसनको रूपमा चलेका छौ । अब कर्पोरेट स्वरूपमा हामी जान आवश्यक छ । एएफसीले पनि यो कुरा निर्देश गरी सकेको छ । यसका लागि सेयर बाँडफाँड लगायत काम हुने छ । आर्थिक रूपले सशक्त हुँदै अगाडी बढ्नु पर्छ जस्तो मलाई लागेको छ ।
यसका लागि हामी योजनाका साथ आउने छौ । यसमा सबैको साथको अपेक्षा गरेका छौ ।
अन्य आम पाठकहरू र फुटबल समर्थकलाई केही भन्नु छ ?
यस पटक साधारण सभामा मलाई विश्वास गर्नु भएकोमा सबै प्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । तपाइहरूको विश्वासका साथ म माथि चुनौती पनि थपिएको छ ।
प्रायोजक व्यवस्थापन लगायत चुनौतीमा राखेप र एन्फा लगायत निकायको साथ भए राम्रो हुने थियो । क्लबहरूलाई टिकाउन र समस्या समाधान गर्न थप योजना माथिल्लो तहबाटै बनाउन आवश्यक देखेको छु ।